Uhlalele ethembeni umndeni owalahlekelwa | News24
Uhlalele ethembeni umndeni owalahlekelwa
ISITHOMBE : sithunyelweUMinenhle Ndawonde osekuphele unyaka elahlekile.
YIZE sekuphele unyaka indodakazi yabo idukile, umndeni wakwaDlamini KwaMafunze, e-Elandskop uthi awulilahlile ithemba.
UMinenhle Ndawonde (17) kuthiwa wagcina ukubonakala ngoNhlolanja (February) ngonyaka odlule. Ngokusho kukagogo wakhe umaDlamini, uMinenhle wahamba eyobheka ingane yakhe esibhedlela ngesikhathi kuthiwa iyagula.
“Ingane yakhe yayingahlali naye yayihlala kubo kababa wayo ngoba yena wayesafunda.
Yagula ingane kwaze kwaphoqa ukuthi idluliselwe esibhedlela nokuyilapho okwafuneka khona umama oyizalayo ukuze ezochaza ukuthi eyiphi imigomo ingane engayitholanga.
“UMinenhle wayengazi ukuthi ingane ikwesiphi isibhedlela kodwa waqhubeka wathi uyofuna ingane yakhe.
Seloku ahamba ngaleso sikhathi akaphindanga wabuya ekhaya kanti wagcina engafikanga nase sibhedlela,” kuchaza ugogo.
Uqhube wathi selokhu umzukulu wakhe anyamalala akakutholi ukuphumula njengoba ezibuza ukuthi ngabe ulaphi nokuthi ulale edleni.
“Sengike ngagula ngalala esibhedlela i-Edendale inyanga yonke ngenxa yokuxakaniseka emoyeni. Okubuhlungu kakhulu ukuthi lomuntu ubelala nami embhedeni, ukuya kwami ukuyo lala kungikhumbuza yena.”
UmaDlamini uthe nakuba besanethemba lokuthi bazoyithola isaphila indodakazi yabo, kodwa uma kuwukuthi ayisekho emhlabeni sebekhalela ukuthola umzimba noma ithambo layo.
“Sesiside lesikhathi, uma nje singathola noma ithambo lakhe lokho kuyosinika ukuthula ezinhliziyweni zethu sazi ukuthi sambekaphi noma washonaphi. Selokhu ahamba izinhliziyo zethu zisele nesilonda esingapholi.
Ngivuka phakathi namabili ngikhuleke ngicele enkosini ukuthi ingibonise indlela noma imbuyise ekhaya uma kungukuthi usaphila.
Ngisho umama wakhe usengumuntu obuthakathaka ngenxa yokuphathwa kabi ilolu daba,” kuchaza yena.
Uqhube wathi nakuba uMinenhle ebebuye ahluphe kodwa ubengakaze anyamalale ekhaya angaziwa ukuthi ushonephi.
Umndeni wakwaDlamini ucela noma ubani ongaba nolwazi ngokunyamalala kwaMinenhle Ndawonde ukuba axhumane noBawe Dlamini enombolweni ethi: 079 120 2253 noma axhumane noPhili enombolweni ethi:079 428 4017.